Olee otú Hichapụ Songs si iPod nano
> Resource> iPod> Olee otú iji Hichapụ Songs si iPod nano
M mkpa ịmara otú m nwere ike wepu songs si m iPod. M nwere ọhụrụ iPod nano. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla nke ị maara, biko, ka m mara! Daalụ!
Nweworo niile music na gị iPod nano ọtụtụ ugboro, ma ugbu a chọrọ ka ihichapụ ha nile na-eme ka ụlọ maka ọhụrụ songs? Ọ bụrụ na ị na-enweghị echiche ka ihichapụ music si iPod nano, ị na-nri ebe. Taa, m ga-egosi gị otú ihichapụ songs na gị iPod nano mfe na Wondershare TunesGo. Ọ na-enye gị ka ị na naanị hichapụ ihe niile songs na gị iPod nano ozugbo, ma na-eme ihe ọ bụla ndị nọ iTunes.
Olee ka ihichapụ songs si iPod nano mfe
The akụkụ n'okpuru tumadi na-agwa gị nkọwa nke ihichapụ songs si iPod nano nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Step1. Download a usoro - TunesGo na kọmputa gị
Ka malitere, download na wụnye a usoro na kọmputa gị. Nke a na usoro bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na kọmputa na-agba ọsọ Windows 8, Windows 7, Windows XP, na Windows Vista. Ẹkedori ya, na ị ga-ahụ bụ isi window.
Step2. Jiri eriri USB jikọọ gị iPod nano na kọmputa
Jikọọ gị iPod nano na kọmputa site na eriri USB. Gị iPod nano ga-ahụrụ anya. Mgbe ahụ, media faịlụ gị iPod nano ga-emere ke akpan window.
Step3. Wepụ songs si iPod nano
Na-ekpe sidebar, pịa "Media". Ị ga-ahụ a menu mmanya na n'elu nke media window. Pịa "Music". Ebe a, niile songs na gị iPod nano na-depụtara. Tulee boxed tupu songs na ị chọrọ iji wepụ. Mgbe ahụ, pịa "Hichapụ". Na mmapụta window, pịa "Ee".
Cheta na: Tupu ihichapụ songs on iPod nano, ị bụ ike nke na-ebufe ndị a songs na gị iPod nano gị na kọmputa na iTunes maka ndabere.
E wezụga ihichapụ songs anya iPod nano, na ị na-enwe ike ihichapu nkịtị listi ọkpụkpọ na gị iPod nano kwa. Pịa "Playlist" ke hapụrụ sidebar. Na playlist window, ịhọrọ listi ọkpụkpọ na ị ga-ihichapụ, wee pịa "Hichapụ".
Cheta na: dị ugbu a, ị na-enweghị ka ihichapụ smart listi ọkpụkpọ na TunesGo. E wezụga na, a usoro akwado iPod nano 7, iPod nano 6, iPod nano 5, iPod nano 4, iPod nano 3, iPod nano 2 na iPod nano.
Nke ahụ bụ mfe nkuzi banyere otú ka ihichapụ music si iPod nano na TunesGo. Mgbe nhichapụ, ị nwere ike mbubata ọkacha mmasị gị songs gị iPod nano. Na music window, pịa triangle n'okpuru "Tinye" na-ahọrọ "Tinye File" ma ọ bụ "Tinye nchekwa" ịgbakwunye music gị iPod nano.
Ugbu a, na-agbalị TunesGo ka ihichapụ music on iPod nano!
Olee otú jikwaa iPhone Ndi ana-akpo Mfe
Olee otú Naghachi Photos si iPod Nano
Olee otú Naghachi ehichapụ / Lost faịlụ site iPod